Magic chikafu motokari, inova yepamusorosoro zvebhizimisi kushandisa akagadzira, kukura, kugadzirwa uye rokutengesa ezvokutengeserana motokari.
The kambani nezvaIshmaeri R & D uye utsanzi sezvo paro makwikwi, uye akagadza rakaisvonaka R & D uye magadzirirwo chikwata, nanga ungwaru, kushandisa michina, specialization, uye kunatsiridzwa.
We kungoomerera akazvimirira utsanzi. The kambani aita anopfuura 100 National-pamwero michina patents, ichipa munhu zvichienderana Mobile chitoro negadziriso mutengi zvinodiwa, uye kubatsira vatengi kuvaka mutsva bhizimisi uzivi.
The kambani iri nyanzvi akaigadzira munhu zvichienderana Mobile zvitoro. The zvigadzirwa akafukidza hwakawanda pakubhadhara akadai mumarori Fast Food, siyana aizikirimu ngoro,-siyana kubika ngoro, yezvokutengeserana ngavasununguke motokari, Studio motokari, uye runako ezvipikiri mota.
Bhizimisi chinofukidza nezvikafu zvishoma, mumigwagwa rinonwa, ngavasununguke, midziyo yemagetsi, musha kwaakaita, nguo maindasitiri, runako meikki maindasitiri, pekugara maindasitiri, tourism nezvimwe maindasitiri. zvigadzirwa dzedu aivigirwa kuUnited States, South Korea, European Union, kuMiddle East uye dzimwe nyika dzomuAsia uye European uye kumatunhu.